जान्नुहोस्, महिनावारी भएको कति दिनपछि सम्बन्ध राख्दा गर्भ बस्छ ? - News 88 Post
November 27, 2021 N88LeaveaComment on जान्नुहोस्, महिनावारी भएको कति दिनपछि सम्बन्ध राख्दा गर्भ बस्छ ?
आजकल बिहे हुनेबित्तिकै मानिसहरूको सिधा प्रश्न यो हुन्छ कि घरमा सानो पाहुना कहिले आउँछ ? अक्सर मजाक मजाक मै साेधिने यस प्रश्नलाई कतिपय जोडीले गम्भीरताका साथ लिन्छन् त कसैले बेवास्ता गर्छन्, किनकी आजकल अधिकांश जोडीले मजेदार समय बिताउनका लागि पनि फेमिलि प्लानिङ गर्न समय लगाउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा, जब तिनीहरू तयार हुन्छन्, तिनीहरू पहिले गर्भावस्थासँग सम्बन्धित सबै जानकारीहरू जम्मा गर्ने प्रयास गर्छन्। यस्तो बेला महिलाको दिमागमा सधैं प्रश्न आउँछ कि महिनावारी भएको कति दिनपछि गर्भ रहन्छ ?
सबैभन्दा पहिले यी कुराहरूमा प्रष्ट हुनुपर्छ। वास्तवमा महिनावारी भएको कति दिनपछि गर्भ रहन्छ भन्ने कुरा महिलाको अण्डाशयबाट निस्कने अण्डामा निर्भर हुन्छ । र गर्भ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा डिम्बाशयबाट निस्कने डिम्बबाटै अनुमान गरिन्छ ।
यौ’नस’म्पर्कका क्रममा डिम्बाशयबाट निस्कने डिम्ब शुक्रकीटमा मिसिएमा गर्भधारण निश्चित हुन्छ तर यो डिम्बाशयबाट निस्कने समयमा भर पर्छ, जुन तपाईलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
यदि तपाइँ आफ्नो पार्टनरसँग महिनावारी भएको 14 दिन पछि सम्बन्ध राख्नुहुन्छ भने, गर्भवती हुने सम्भावना धेरै हदसम्म बढ्छ। किनभने महिनावारी भएको १४ दिनपछि अण्डाशयबाट अण्डा निस्कने सही समय हो।
डिम्बाशयबाट निस्कने अण्डा १२ देखि १४ घण्टासम्म बाँच्न सक्छ र १२ देखि १४ घण्टाभित्र यौ’नसम्पर्क गरेमा शुक्रकीटले निषेचन गर्छ, जसले गर्दा गर्भ रहन्छ ।
May 10, 2022 N88
गठबन्धनको सुर्के गाँठो फुस्किने संकेत, अब के गर्लान् माधव र प्रचण्ड ?
April 17, 2022 N88